काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
काठमाडाैं । आज मध्ये दिउसाे काठमाडाैंमा भूकम्पकाे महशुस भएकाे छ। भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको जेथाल केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको भूकम्पले काठमाडाैं हल्लाएकाे हाे।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार दिउँसो १२ः५४ बजे जेथाल केन्द्रबिन्दु भएर ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प भएको सो केन्द्रले जनाएको छ। विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि हालसम्म नेपालमा ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५५९ परकम्प गइसकेको छ।
त्यस्तै भारतको झारखण्ड र आसपासतिर बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव र मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा केही दक्षिणतिर रहेकोले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाअनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।